Kooxda Juventus oo xaqiijisay dhaawacyada Ciyaaryahadda De Ligt iyo Costa | Radio Balcad
Home WARARKA CIYAARAHA Kooxda Juventus oo xaqiijisay dhaawacyada Ciyaaryahadda De Ligt iyo Costa
Kooxda Juventus oo xaqiijisay dhaawacyada Ciyaaryahadda De Ligt iyo Costa
Kooxda Kubadda Juventus ayaa xaqiijisay dhaawacyada Ciyaaryahadda De Ligt iyo Costa
Ciyaaryahan Matthijs de Ligt ayaa shaki uu ku jiraa kulanka Juventus ay la ciyaareyso Atletico Madrid ee Champions League ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray kulankii sabtida ee ay 3-1 kaga badiyeen Naadiga Atalanta.
Saaxiibka ay isku kooxda yihiin ee Douglas Costa ayaa dhaawac ku seegi doona kulanka Atletico ka dib dhaawac bowdada ka soo gaaray, sida ay tilmaamtay Kooxda Juventus.
Guushii ka dhacday Bergamo ayaa aheyd tii shanaad ee Juventus oo isku xigta tartamada oo dhan waxayna sarre ka heystaan ​​Serie A, hal dhibic ayey ka sareeyaan Inter, laakiin guuldaradii ka soo gaartay maqnaanshaha De Ligt ee maqnaanshaha Costa ayaa dhabarjab ku noqon doonta madaxa tababare Maurizio Sarri.
Daafaca dhexe De Ligt ayaa ku soo bilowday 10 ka mid ah 13 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, iyadoo Giorgio Chiellini uu dhaawac jilibka ah ku seegi doono saxiixa 75 milyan euro ee ay ka soo qaateen Ajax.
Bayaan lagu soo dhigay bogga rasmiga ah ee kooxda Juventus ayaa lagu yiri: “Ka dib baaritaanadii baaritaanka lagu sameeyay saakay waxaa soo baxday in Matthjis de Ligt uu dhaawac ka soo gaaray garabka midig kulankii shalay islamarkaana haatan waxa uu bilaabay daaweyntii ku habboon iyo soo kabsashadii.”
Daaweynta iyo soo kabsashada sidoo kale waxaa loogu talagalay Federico Bernardeschi, kaa soo dhaawac ka soo gaaray hemithorax midig.
“Douglas Costa waxaa soo gaadhay dhaawac hoose oo ka soo gaadhay murqaha semitendinosus ee bowdada midig wuxuuna bilaabay daaweyn dhaqan celin ah.”
Juventus ayaa sheegtay in xaalada garabka Costa, inay ku qaadaneyso 15 maalmood inuu si buuxda uga soo kabsado.
Previous articleDaawo Shiikh Umul ”Aniga Ayaa Codsaday In Muxaadaradu Ay Baaqato Inta Uu Dhiig Ku Daadan Lahaa”
Next articleKooxaha Shelf United Iyo Manchester United oo ba-bar Ku Idlaatay
Dani Ceballos Oo Haatanba Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalkayga.
RASMI: Isku aadka afar dhammaadka Supercopa de España oo la sameeyey…...